Ramaad – Mashruuca gargaarka deegaanka ee Soomaliya iyo Geeska Afrika | Suomen Somalia-verkosto
Ramaad – Mashruuca gargaarka deegaanka ee Soomaliya iyo Geeska Afrika
Hawlihii sanadka ugu horeeyay waxaa ka mid ahaa kulan ay si wadajir ah magaalada Muqdisho ururada oo dhammi (7-da ururu) uga qaybqaateen.
>> Mashruuca Sahansaho
Min laba siminaar oo laga Fulinayo 3da xarummood ee mashruucu ka socdo, seminaarada waxaa ka soo qaybgalaya dhamaan daneeyayaasha Mashruuca (stakeholders).
Tijaabo lagu tijaabinayo Burjikooyin Casriya oo ku habboon Beekhaaminta Dhuxusha iyo keydinta tamarta. Tababarka shaqaalaha mashruuca oo ku saabsan farsamooyinka geedaha sida loo xannaaneeyo marka la beerayo iyo tallaabooyinka diyaarinta in la dhiso xarumaha maxalliga ah deegaanka.
Waxaa intaa dheer, inta lagu guda jiro sanadka ugu horeeya waxaa la fulinayaa daraasad (baseline study) laga fulinayo goobaha mashruucu ka socdo si loo caddeeyo qorshaha wajiga soo socda.
Ujeedada kale oo muhiimka ah waa dhisidda awoodda shaqo ee maamulka mashruuca iyo isku-xidhka oo dhan ee ururrada Deegaanka ee mashruuca kala shaqeeya Ururada Finland ee Finnish Somalia Network xubnaha ka ah.
Si hadaba kor lowgu qaaddo awoodda ururka ayaa waxaa tababar lasiinayaa shaqaalaha ururada iyadoo laga caawinayo arrimaha la xiriira maamulidda maaliyadda, kormeeridda iyo dabagalka shaqada Mashruuca, soo tabinta warbinxinada shaqada ee Mashruuca, iyo waliba iyadoo la fulinyo Seminaaro iskaashi.
Maalgelin dheeraad ah ayaa looga dalbay mashruuca Ramaad Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Finland sanadda 2015. Jawaabta Dalabka maalgelinta waxaa la filayaa dhamaadka sanadka 2014.
Ujeedooyinka sii socoshada mashruuca, waxaa ladoonayaa in kor loo qaado wacyigalinta deegaanka, in uu hoos u dhaco isticmaalka dhirta, ilaalinta noocyada kala gadisan ee geeddaha Deegaanka ka bixijiray iyo kordhinta geedaha la beerayo iyo sidoo kale hagaajinta awoodda iyo wada shaqeynta ururada Soomaaliya, Puntland iyo Soomaaliland ee Mashruuca kala Shaqeeya urarada Xubnaha ka ah Finnish Somalia Network.
Mashruucan Ramaad ayaa bilaabmay sanadkii january 2014 iyada oo sanad tijaabo ah lagu billaabay. Saddex goobbood ee uu mashruucu ka socdo waa Afmadow oo katirsan Maamulka Jubbaland, El-Adde oo ka tirsan Gobalka Gedo, iyo Guriceel-Dhuusa mareeb oo ka tirsan Gobolka Galgaduud.
Mashruucan ayaa waxaa maal-galiyay Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Finland.
Ujeedada mustaqbalka fog ee Mashruuca waa in kor loo qaado horumarka joogtaysan (sustainable development) ee deegaanka iyo fayo-qabka (well-being) dadka degaanka ku nool, si hadafkaas loo gaaro waa in kor loo qaado ladagaallanka xaalufka idhirta.
Mashruucu wuxuu kor u kicinayaa wacyigelinta arrimaha deegaanka la xiriira, wuxuu horumarinnayaa qaabka isticmaalka dhuxusha loo beekhaamiyo si loo yareeyo isticmaalka dhuxusha, wuxuuna mashruucu abuurayaa shabakado cusub (ururo) iyo wada shaqeyn laga dhex abuurayo wadamo kala gadisan, Gobolada Soomaliya iyo Geeska Afrika oo dhan, ururo ka howl gala gobalada Deegaanka oo kala gadisan, Beelaha Soomaalida qaybaheeda kala duwan oo arrimaha Deegaanka Geeska Afrika si mutadawacnimo ah uga wada shaqaynaya, dhammaan waxaa laga wada shaqaynayaa kor u qaadidda iyo dhowrista Deegaanka Soomaliya iyo Geeska Afrika.
Mashruucan Ramaad waxaa maamula iskuna duwa Finnish Somalia Network, waxaana kala shaqeeya oo ay howsha wada fuliyaan sadex Urur oo ka howl gala Finland oo xubno ka ah Finnish Somalia Network iyo Sadex urur oo iyana ka howl gala Degaanka oo howsha Geeska Afrika ka socota u xilsaaran.
Sadexda urur ee Finland ka howl gala waa:
Sadexda urur ee Degaanka ka howlgala oo layashaqeeya ururada Finland sida ay isugu xigaan: